Sọpụrụ Anwansi Lelee 2, batrị, ezigbo ego na ọtụtụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, smartwatch
Honor ewepụtala ụdị ọhụụ nke smartwatch ya. Anyị maara na Sọpụrụ Ikuku Ime Anwansi 2 ihe na-abịa juputara na ozi. Likefọdụ dị ka imewe update ha doro anya. Na njirimara ndị ọzọ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iji anya nkịtị hụ ha, mee ka ụdị ọhụụ a dị mma karịa nke mbụ.
Otu n'ime ihe ndị kasị pụta ìhè atụmatụ bụ nnukwu nnwere onwe nke nwere ike ịnye batrị ya. Ruo izu 2 nke igbochi ojiji Enweghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka nke kachasị n'ụdị. Nọmba ụfọdụ na-etinye ya n'etiti smartwatches nwere nnwere onwe dị ukwuu n'ahịa dị ugbu a.
1 Sọpụrụ Ime Anwansi Watch 2, batrị maka izu abụọ
2 Sọpụrụ Anwansi Lelee 2, ezigbo ọnụahịa na ọtụtụ ndị ọzọ
Sọpụrụ Ime Anwansi Watch 2, batrị maka izu abụọ
Ọ bụ ezie na dị ka anyị na-ekwu, oge nke batrị ya bụ otu n'ime isi ihe dị egwu, Magic Watch 2 na-apụtakwa maka akụkụ ndị ọzọ. Isi ihe ga - eme iji nweta nnwere onwe n'ụzọ dị otú a bụ ịnwe seamlessly kachasị sistemụ iji mee ka ọrụ gị na-aga.
Onye nhazi ahọpụtara maka Ime Anwansi ọhụrụ a bụ Kirin A1. A processor na-anọchi nke fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla. Ma ihe kemgbe kere naanị maka ngwaọrụ nke ụdị a ma nke ahụ mezue ozi ya na zuru solvency àjà a mara mma nke ukwuu ọrụ ahụmahụ.
Anyị na-achọta nsụgharị abụọ na nha dịgasị iche iche, nwekwara mkpebi dị iche iche. Ihuenyo 42mm na mkpebi 390 x 390 pixel, na ihuenyo nke 46 mm, na mkpebi nke Pikselụ 454 x 454. Banyere imewe ahụ, na ụdị ọhụụ ọhụrụ nke Igwe Anwansi, a ihe mara mma ma nụchaa. Ọ bụ ezie n’etinyeghị uru ndị ezubere maka iji egwuregwu dị nnọọ ọtụtụ.
Sọpụrụ Anwansi Lelee 2, ezigbo ọnụahịa na ọtụtụ ndị ọzọ
Anyị ka ga-echere ruo etiti ọnwa Disemba iji jide Honor wearable ọhụrụ. Ma anyị amaworị ahịa na anyị ga-akwụ ụgwọ maka nsụgharị ya ọ bụla. Dị kasị nta, 42mm ga-eri ihe dịka euro 179ma isi mbipute, 46mm, 189 euro. Ọnụahịa ndị yiri ihe ezi uche dị na ha maka atụmatụ na atụmatụ ha na-enye anyị.
Anyị ga-enwe na mgbakwunye na nke anyị gwaworo gị, ọnụọgụ obi na ihe mmetụta atr fibrillation. Njikọta Bluetooth 5.1, mic na-ekwu okwu na ọkà okwu, GPS ugboro abụọ, nguzogide mmiri na ọtụtụ NFC. Dị ka anyị na-ahụ nnọọ ihe ọ bụla ịhapụ. Obi abụọ adịghị ya, Sọpụrụ cha cha ike na ngwaọrụ zuru oke dị njikere iji nweta ọnọdụ ya na mpaghara ahụ. Onyinye ekeresimesi ị na-achọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sọpụrụ na-egosi Ime Anwansi 2
Tone Ultra na Actda na-arụ ọrụ +, nke a bụ ụdị ụda ekweisi LG dị